Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee 24 Dheddig Milatari ee loogu talagalay Raga - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee 24
In la helo tattoo ciidan oo aad u macquul ah oo aad u macquul ah, waa inaad heshaa tattooist xirfad leh oo kaa caawin kara inaad si fiican u sawirtid gaar ahaan haddii aad tahay qof xifdisan.
Waxaa jira noocyo badan oo ah tattoos milatari oo aad isticmaali kartid markaad u muuqato inaad raadinayso qaab aan caadi ahayn ee muuqaalkaaga Sida ay dadku u yimaadeen inay aqoonsadaan tattoosku waa sababta aan u aragno in dad badani isticmaalaan.
1. Qodobada Quruxda Dhexe
2. Fikradda naqshadeynta taatuuga ee ragga
Tattoo militariga ayaa ka fudud sida laga yaabo inaad ka shakisan tahay oo u baahan tahay dhawr shay oo kaliya oo si dhakhso ah looga heli karo dukaamada tattoo. Kuwani waa meelo aad ka heli kartid naqshado fara badan.
3. Taabasho milatari oo xoog leh
Fikrado ka mid ah hababka aasaasiga ah ee loogu talagalay in lagu dhejiyo tattoo # shaybaarka waxaa kaliya lagu muujin karaa markaad haysato tattoo ciidan taas oo macno u leh sidan
4. Fikradda naqshadeynta tattoo milatariga ee ugu fiican
Waxaad soo saari kartaa fikradahaaga shaati-bararka ee waraaqda ka hor inta aadan ku siinin maqaarkaaga maqaarkaaga, si kastaba ha ahaatee xusuusnow in istaroogga xooggan ee ugu xooggan uu noqon doono.
5. Tattoo Milatariga
Maalmahan, waxaan aragnay tattooskan milatari ee kuu keeni kara inaad ku faantid oo aad qofka kale ee xiga u noqoto mid maskaxdeeda ah oo aan haysanin.
6. Fikradda naqshadeynta milatariga ee loogu talagalay ragga
Adiga ayaa ah inaad go'aan ka gaartid waxa lagaa rabo markaad sameysid dhamaan tarjumooyinka saxda ah ee aad ku habeysey.
7. Tattoo awood leh
Sawirka indhoole #Tattoo wuxuu ku dhaqi doonaa si taxadar la'aan leh biyo diiran oo diiran, taas oo ah sababta taatuuga ciidanku uu noqdo mid ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u hesho marka si waxtar leh loo sameeyo.
8. Fikradda naqshadeynta riwaayadaha ee ragga ragga
Markaad ka fikirto tattoosada milatariga waxay u badan tahay inaad qaadatid wakhti aad ku qadarin kartid waxa kugu xeeran. Markaad sidan sameyso, waxa soo socda oo aad sameyn kartid waa inaad raadiso meesha aad dhigan karto.
9. Tattoo militari ee Heroric
Meesha ka mid ah tattoo-gaaga waxaa kaliya oo la bixin karaa marka aad leedahay fikrado isku-dhafan oo ku habboon. Goonku waa maalmo aan dadku si dhab ah u qadarin wax wanaagsan oo ay ka muuqdaan internetka
10. Tattoo shidaal militari
Waa inaad xusuusataa in tattoo ciidanku marwalba ka dhigi doono in dadku xasuustaan ​​xusuusto xanuun leh taas oo ah sababta tashadaan ciidanku noqdaan wax qofku u beddeli karo si uu ugu habboonaado qofka
11. Tattoo milatariga
Nooca noocan ah ee tattoo ciidanku wuxuu socon doonaa ilaa iyo inta aad rabto. Dadka raadinaya hab ay ku kala duwan yihiin waxay samayn karaan oo keliya marka ay leeyihiin qaab tafaasiil oo weyn sida tan.
12. Ciidankii ugu wanaagsanaa ee tashuuca ragga
Qofna ma arkin tattoo sidan oo kale, wuxuuna doonayaa inuu yeesho naqshad ama wax la mid ah.
13. Tattoo Milatariga
Qaar ka mid ah dadku waxay doonayaan in ay yeeshaan shaati laakiin qaar ka mid ah dadku waxay fahmaan in tattoo ciidanku uu yahay mid aad u awood badan oo muhiim u ah in ay ku xiran tahay.
14. Tilmaamaha ciidda xusuus-qorka ee ragga
Shakhsiyaad badan oo adduunka ku nool waxay u jogaan muuqaalka filimka milatari, haddana ha dareenin sida ay u shaqeynayaan.
15. Tattoo milatariga
Ka fikir suurtogalnimada inaad hesho tattoo ciidan iyo dadku waxay ku weydiinayaan su'aalo badan.
16. Tartanka ciidammada millatariga ee ragga ah
Jawaabta ugu wanaagsan ee shakhsiyaadka tattoo taatuuca, si kastaba ha ahaatee waxay u baahan tahay in ay ka fogaato habka ugu dambeeya, waa in la helo tattoosyo aan caadi ahayn.
17. Tartanka ciidda fudud ee ciidan ee ragga
Tani sidoo kale waa jawaabta saxda ah ee loogu talagalay dadka ku haysta qalabka iyo aargoosiga looga baahan yahay dhammaystirka mid.
18. Dhismaha sawirada xusuusta ragga
Marka la eego marka aad raadineyso tattoosaadka aan caadiga ahayn waxaa jira noocyo kala duwan oo la heli karo. Waxaa jira qummanaan, dabeecad qarsoodi ah, iyo henna.
19. Tattoo milatariga oo cajiib ah
Mid kasta oo ka mid ah noocyada noocan ah ee shaati-ka-celinta waxay u keeneysaa qofka xiran iyada oo la adeegsanayo kalkaalisada caafimaadka ee lagu kalsoon yahay jirka.
20. Qabooji ciidda xusuusta millatariga
Qalabka muraayadaha iyo kuwa digitifka ah waa kuwa la geyn karo saliid carruurta ama qamriga. Tattoos-ku salaysan ayaa sii soconaya dhowr toddobaad ama ka badan sidaas darteed haddii tani ay tahay doorashadaada, damaanad ku dhow dhow ee tattoo ma abuuri doonaan wax dhibaato ah.
21. Tattoo ciidan qaali ah
Waa lagama maarmaan in la xasuusto inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in noocyada noocan ah ee tattoosku ay yihiin ku-meel-gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad hesho mid aan ahayn dil.
Fikrado ka mid ah sharaxaadaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya tan waa shaqsiyaad badan, gaar ahaan carruurta dhallinyarada ah, waa dadka isticmaala iyo xirashada tattoosaadka aan caadiga ahayn, gaar ahaan qaybinta miisaanka.
22. Fikradda tattoo milatariga ah ee ku haboon
23. Fikirka tattoo xusuusin milatari oo kugu habboon
Si aad u hubiso in qofka aad xulatay uu yahay kan ugu nabdoon, waxaad u baahan tahay inaad raadiso waxyaabo muhiim ah oo muhiim ah. Hubi in shaati-faleedka aad adigu qaadeyso uu yahay hypoallergenic iyo aan waxyeello lahayn. Noocyadaasi waxay iska ilaalin doonaan maqaarka maqaarka, gaar ahaan maqaarka jilicsan ee da'yarta dhallinyarada ah.
24. Naqshadeynta tattoo xusuusta ee ugu fiican
shaatiinka shiidantattoos cagtatattoo ah octopuscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTilmaamta jaalaha ahmuusikada muusikadaTattoos Wadnahatattoos ubaxtattooslaabto laabtawaxay jecel yihiin tattoostattoos qosol lehlammaanahasawirrada raggagadaal u laabosawirada gabdhahasawirada malaa'igtaTattoo infinitygaraacista gacmahatattoo dheemankoi kalluunkatattoos eagletattoos qabaa'ilkasawir gacmeedlibto libaaxtattoo biyo ahtattoos moontattoo maroodigataraagada kubbaddaTattoo Feathertattoos saaxiib saxa ahtattoos iskutallaabtahenna tattooshimbir shimbirDhaqdhaqaaqatattoos sleevearrow Tattootattoo tilmaantattoos qoortatattoos taajkiinaqshadeynta mehndijimicsiga bisadahatattoos qorraxdaJoomatari Tattoostattoo indhahaku dhaji tattoosfikradaha tattooTartoo ubax badantattoos gacantawaxaa la dhajiyay tattoos